डीआईजी दरबन्दी कटौतीको विवाद : गृहसचिव र आईजीपीबीच शितयुद्ध - Kantipath.com
नेपाल प्रहरीमा डीआईजीको दरबन्दी कटौतीको तयारी भएको छ । हाल ३४ डीआईजीको दरबन्दी भएकोमा त्यसमा केही घटाइने तयारी भएको छ । प्रत्येक डीआईजीका लागि सेवा सुविधामा राज्यले ठूलो खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
विगतमा आफ्नालाई अवसर दिन विनाअध्ययन डीआईजी र एआईजीको दरबन्दी बढाइएको थियो । नेपाल प्रहरीमा तीन एआईजीको मात्र दरबन्दी राखिएको छ । तर, डीआईजीका दरबन्दी भने पुरानै छ । एआईजी दरबन्दी विगतमा घटाइँदा राज्यको खर्च केही घटेको थियो ।
यसपटक डीआईजीमा कम्तीमा दस पद घट्ने सम्भावना रहेको बुझिएको छ । हाल दुई दर्जनभन्दा बढी डीआईजीको दरबन्दी रिक्त छ । यसले प्रहरीभित्र खैलाबैला भएको छ । डीआईजी बढुवाका लागि एसएसपीहरु दौडधुप गरिरहँदा दरबन्दी कटौती प्रक्रियाले खैलाबैला भएको हो ।
तर, आईजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली दरबन्दी घटाउन नदिने पक्षमा हुनुहुन्छ । उहाँ बढुवाको लाइनमा रहेका अधिकृत एसएसपी र एसपीबाटै घर जाने परिस्थिति आउँदा आफू संगठनभित्र अलोकप्रिय हुनुपर्ने चिन्तामा रहनु भएको बुझिन्छ । यसअघिका आईजीपी सर्वेन्द्र खनालका ब्याची तीन एआईजी र १८ डीआईजीले एकै पटक अवकाश पाएपछिको अवस्थामा २२ पद खाली रहेको छ ।
ज्ञवाली डीआईजीबाट सिधै आईजीपी बन्नुभयो । तीन डीआईजीको एआईजीमा बढुवा सिफारिस भइसकेको छ । महेशविक्रम शाहले तीन महिनाअघि नै अवकाश पाइसक्नु भएको छ । विशेष पद सृजना गरेर राजेन्द्रमोहन श्रेष्ठको डीआईजी बढुवा भएको थियो ।
उहाँले पनि अवकाश पाउनु भएपछि उक्त दरबन्दी स्वतः खारेज भएको छ । हाल प्रहरीमा १२ डीआईजी छन् । उनीहरुमध्ये हालका आईजीपी ज्ञवाली र एआईजीमा सिफारिस हुनुभएका शैलेश थापा र हरि पालका ब्याची छन् । विश्वराज पोखरेल एक जनामात्र जुनियर ब्याचका हुनुहुन्छ ।
अब डीआईजी बढुवाका लागि ९१ औं समूह अर्थात् शैलेश थापाका ब्याची समेत छन् । त्यसपछिका विश्वराज पोखरेलका ब्याची मात्र नभई जुनियर ब्याची पनि बढुवाको प्रतिष्पर्धामा छन् । सिनियर ब्याचबाटै १६ जना एसएसपी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
बढी संख्यामा दरबन्दी खाली भएकाले तीन वटा ब्याचका एसएसपी बढुवाको प्रतिष्पर्धामा भएका हुन् । अचानक दरबन्दी कटौतीको विषय आएपछि धेरैजसो निराश हुन थालेका छन् । २२ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवाको लागि ३४ जना वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
एसएसपी धनश्याम अर्याल, पुरुषोत्तम कँडेल, गणेशबहादु र ऐर, वसन्त पन्त, प्रकाशजंग कार्की, ईश्वरबाबु कार्की, राजेशलाल कर्ण, दिलीप चौधरी, देवबहादुर बोहोरा र रामकृपाल शाह सिनियर हुनुहुन्छ । उहाँहरु डीआईजी विश्वराज पोखरेलभन्दा ११ महिनाअघि प्रहरी संगठनमा प्रवेश गर्नु भए पनि डीआईजी बढुवा हुँदा पछि पर्नु भएको थियो ।
त्यस्तै उत्तमराज सुवेदी, धीरजप्रताप सिंह, वसन्त लामा, दिवेश लोहनी, रवीन्द्र धानुक बढुवाका प्रमुख दाबेदार हुनुहुन्छ । २०७५ वैशाखमा एसएसपीमा बढुवा भएका सहकुल थापा, प्रदीप श्रेष्ठ, अरुण बिसी, हरिराज बाग्ले, प्रकाश अधिकारी, सुशील यादव, किशोर सिंह, नलप्रसाद उपाध्याय, दे वबहादुर बोगटी, मोहन आचार्य, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, नरबहादुर खत्री, मसाउद आलम खाँ, शेखर कोइराला डीआईजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ ।
पहिलो सिनियर ब्याचका १६ जना तथा जुनियर ब्याचका १९ जना प्रतिस्पर्धामा छन् । सिनियर ब्याचका केही एसएसपी पटक पटक कारबाहीमा परेको र कार्यक्षमतामा कमजोर भउकाले छुट्ने सम्भावना छ । प्रहरी नियमावली २०७१ को नियमत २७ (१) (ख) अनुसार डीआईजीको बढुवा समितिमा गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष, आईजीपी सदस्य र आईजीपीले तोकेको एआईजी सदस्य सचिव रहन्छन् ।
नियम ३० उपनियम (२) (१) अनुसार बढुवाका लागि बस्ने समितिले ज्येष्ठता, कार्यदक्षता, कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मानेर बढुवा गर्नुपर्छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत ४० अंक, ज्येष्ठताबापत २०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापत आठ, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ७.५, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत पाँच, विभूषण (मानपदवी, अलंकार तथा पदक) बापत दुई, बढुवा समितिले दिने ७.५ अंक गरी सबैभन्दा बढी अंक पाउने व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बढुवा समितिले दिने नम्बरमै चलखेल हुने भएकाले बढुवा सधैं सोसफोर्स चल्ने गरेको छ ।
डीआईजी कटौतीबारे गृह सचिव-आईजीपी भनाभन :
‘कुनै करिअर प्लान नबनाई, औचित्य र आधार पुष्टि नगरी डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्ने कुरा कहाँबाट आयो सर ?’ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली फागुन दोस्रो साता आफ्नो कार्यकक्षमा जंगिएपछि गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने केहीबेर अक्क न बक्क भए ।
न्यौपानेले समायोजन र संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण बन्ने क्रममा रहेको र १० वटा डीआईजी पद खारेज गर्ने विषय ज्ञवालीलाई सुनाएका थिए । ‘समायोजन प्रक्रिया अघि बढेको छ, दरबन्दी र पद तलमाथि हुन सक्छ, छलफल गरेरै अघि बढ्ने हो,’ गृहसचिवले यसो भनेपछि ज्ञवाली जंगिएका थिए । ‘केहीबेर भनाभन नै भयो,’ न्यौपाने र ज्ञवालीबीचको भेटबारे स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ (ज्ञवाली) प्रहरी संगठनबारे गृहसचिवलाई आफ्ना कुरा राखेर निस्कनुभयो ।’ त्यसपछि आईजीपी ज्ञवालीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसँग नेपाल प्रहरी कमजोर बनाउने गरी कानुनी प्रावधान ल्याउन नहुने धारणा राखेको स्रोतले बतायो ।
प्रहरीमा साधारण सेवातर्फ डीआईजी दरबन्दी ३४ रहेकामा गत माघ २८ देखि २२ रिक्त छन् । रिक्त दरबन्दीसमेत समेटेर समायोजन गर्न लागिएको छ ।न्यौपानेका अनुसार समायोजनपछि प्रदेशमा करिब ५५ हजार र केन्द्रमा २५ हजार जति प्रहरी हुनेछन् । प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व अब डीआईजीले गर्ने भएकाले ७ प्रदेशमा ७ डीआईजी हुनेछन् भने केन्द्रमा २७ जना रहनेछन् । ‘२५ हजार प्रहरीका लागि २७ डीआईजी किन चाहियो ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले वैज्ञानिक वृत्तिविकास प्रणाली, संगठन पुनर्गठन र पुनःसंरचनाबिनै प्रहरीमा निश्चित पदसंख्या खारेज गर्ने विषय प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने बताए । ‘अहिले प्रहरीका उपल्लो तहमा कतिपय पद बढी छन्, तिनलाई फिल्टर गर्न आवश्यक छ, विगतका व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर बढाइएका दरबन्दी कटौती हुनैपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘तर बढुवालगायत वृत्तिविकासको मुखमा रहेका अधिकृतबारे केही नसोची डीआईजी वा अन्य पद खारेज गर्न खोज्नु कति जायज हो ? यसप्रति निर्णय तहमा बस्नेले सोचविचार गर्नुपर्दैन ?’
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृतले समायोजनपछि प्रहरीको केन्द्रीय संरचना झन् बलियो बनाउनुपर्नेमा कमजोर र अस्थिर हुने गरी खाका बनाउन लागिएको आरोप लगाए । ‘प्रहरीको केन्द्रीय संरचना संघीय अवधारणाअनुसार थप बलियो र साधन–स्रोतसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा कमजोर हुने गरी ओएन्डएम र समायोजन खाका बनाउन लागिएको छ, यसप्रति हामीले मन्त्रालयमा स्पष्ट रूपमा धारणा राखिसकेका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘प्रहरीको एकीकृत ऐन नबनाई जनशक्ति घटाउने, भएका अधिकार खुम्च्याउने काम प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ ।’
पूर्वएआईजी भण्डारीले प्रहरीले अब दर्जासँगै जिम्मेवारी पनि माग्नुपर्ने बताए । ‘हिजो प्रहरी निरीक्षकले गर्ने काम अहिले एसपीले गर्दै आएका छन्, व्यक्तिकेन्द्रित हुँदा पदीय गरिमा कायम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘पदसँगै पदीय अधिकार पनि त माग्नुपर्‍यो नि ।’ कानुन कार्यान्वयन, नियमित शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन तथा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणको अधिकार पाएको संगठनको पुनःसंरचना, पुनर्गठन र करिअर प्लानसम्बन्धी निर्णय गर्दा गहन सोचविचार र विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
Previous Previous post: महरा र बाँस्कोटा प्रकरणका समाचार ब्रेक गर्ने पत्रकारलाई ८ प्रश्न
Next Next post: अनमोल केसीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी, यसरि दिए स्पष्टीकरण !
NRNA बेलायतमा चार करोड घोटालाको प्रसङ्ग
भागरथी भट्ट हत्या अनुसन्धान अन्तिम चरणमा
शपथपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई पहिलो बधाई नेपालको
प्रचण्ड-माधबको दलको निर्णय दर्ता
चरित्र हत्या गरेको भन्दै, भ्रमको खेती नगर्न सरकारलाई महताेको चेतावनी